Ha la yareeyo waqtiga ka noqoshada iibsiga Internet iyo telefoonada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ha la yareeyo waqtiga ka noqoshada iibsiga Internet iyo telefoonada
Publicerat tisdag 19 mars 2013 kl 10.22
Waxay dowladdu talo ku soo jeedisey in waqtiga laga noqonayo iibsiga ama kireysiga telefoonada gacanta, adeegga internet ama telefishanka laga yareeyo saddex bilood oo laga dhigo hal bil. Wasiirka Tamarta iyo Teknoolajiyada casriga ah (IT- och energiminister) Anna Karin Hatt waxay sheegtay in ujeeddadu tahay in ay dadka u fududaato una jabnaato in ay u beddelan karaan shirkadda ay doonaan.
Waxay kaloo dowladdu soo jeedisay in aysan suurta gal noqon doonin in telefoonka gacanta lagu xiro shirkad qura muddo ka badan waqtiga u xirnaanta. Anna Karin Hatt waxay qabtaa in telefoonku noqdo hantida qofka kadib marka waqtiga ku xirnaantu uu dhammaado.
- Waa wax macquul ah in qofkii telefoon iibsada uu heshiis dheer la galo shirkadda iibisa si loo maalgeliyo telefoonka. Haddaba qofku telefoonka isagaa yeelanaya oo wuxuu doono ku sameynaya mar haddii uu wadabixiyey kharashkiisa.